Home Wararka Madaxweynaha “Turkiga” Erdogan oo joojiyay isticmaalka aaladda Whatsupka
Madaxweynaha “Turkiga” Erdogan oo joojiyay isticmaalka aaladda Whatsupka
Xafiiska warfaafinta madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa shaaciyey in uu ka guuraya WhatsApp ka gedaal markii app-kan uu u soo diray fariimo uu ku dhaqan-gelinayo xeerar cusub oo muran dhaliyey.
WhatsApp ayaa dadka isticmaala u dirtay fariimo ku aadan in ay aqbalaan isbedelka xeerka lahanashiyaha gaarka ah kahor 8-da Febraayo, 2020-ka.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska warbaahinta Erdogan ayaa lagu wargeliyey warbaahinta in ay macluumaadka kula wadaagi doonan BiP, oo ah app laga isticmaalo wadanka Turkiga ayna leedahay shirkadda Turkcell.
Dadka isticmaala WhatsApp ee ku nool Turkiga ayaa kadib markii uu soo baxay xeerarka cusub waxay bilaabeen ololaha ka dhan ah App-kan ayaga oo Twitter-ka ku soo qoray fariimo nuxurkoodu yahay #IskaMasaxaWhatsApp.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Turkiga oo soo xiganeysa Turkcell, BiP ayaa muddo 24 saac gudahooda waxay ku heleen in ka badan 1.12 milyan oo dad cusub, waxayna filayaan in ay tiradda intaas kasii badan kareyso.
Xeerarka cusub ee WhatsApp
WhatsApp ayaa ka dalbaneysa dadka isticmaala in ay ogolaadaan in macluumaadkooda lala wadaagi doonan Facebook iyo xulufadeeda.
Dadka waxaa laga doonayaa in ay ogolaadaan, hadii ay iska diidaana waxay lumin doonan isticmaalka appa-ka wixii ka dambeeya 8-da Febraayo, 2020-ka.
Sabtidii, Ali Taha Koc, oo ah madaxa xafiiska isbedelka dijitaalka ee Madaxweynaha Turkiga, ayaa ku dhaleeceeyay WhatsApp shuruudaha cusub iyo in ay ka reebeen dadka ku nool Ingiriiska iyo Midowga Yurub.
Dadka Turkiga ah ayuu ugu baaqay in ay adeegsadaan barnaamijyadda laga leeyahay waddankaa sidda BiP iyo Dedi.
“Farqiga u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub iyo kuwa kale marka la eego asturnaanta xogta lama aqbali karo! Sida aan ku sheegnay Tilmaamaha Amniga iyo Isgaarsiinta Isgaarsiinta, codsiyada asalka ajaanibta ah waxay leeyihiin khatar weyn oo ku saabsan amniga xogta,” Koc ayaa ku yiri Twitter-ka.
Wuxuu ku daray: “Taasi waa sababta aan ugu baahan nahay in aan ku ilaalino xogteena dijital ah barnaamijyada maxalliga ah iyo kuwa qaranka oo aan u horumarinno si waafaqsan baahidayada. Ha iloobin in xogta Turkiga ay sii joogi doonto Turkiga taas oo ay uga mahadcelinayaan xalalka maxalliga ah iyo kuwa qarankaba”.
WhatsApp ayaa kamid ah apps-ka loogu isticmaalka badan yahay caalamka. Sidda laga soo xigtay xog-uruurintii ugu dambeysya, waxaa ku taxan laba bilyan oo ruux, waxaana kusoo dhaw Facebook Messenger oo ay ku xiran yihiin 1.3 billion qof.